Okwu & Ọnọdụ -
Usoro ọrụ ndị a gụnyere ikike na ọrụ dị n'etiti gị na APlus Global Ecommerce.
Jiri nlezianya gụọ nkwekọrịta ahụ tupu ikwenye ịkwụ ụgwọ ego maka ọrụ anyị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịghọta akụkụ ọ bụla ma ọ bụ nwee ajụjụ ọ bụla, nweere onwe gị ịrịọ anyị maka enyemaka. Anyị na-adụ gị ọdụ ka iwepụta oge dị ukwuu iji ghọta ọrụ anyị na-enye.
"Nkwekọrịta”: Ọ bụ nkwekọrịta dị n’etiti gị na anyị.
"Service”: Ọ bụ ụdị ọrụ ị họọrọ.
"ị”: Onye ahịa ma ọ bụ onye zụrụ ọrụ anyị.
"Us","Anyị","We": APlus Global Ecommerce
2.1. Appointed họpụtara US na ọrụ kwetara na anyị kwetara ịnye ọrụ a chọrọ maka usoro na ọnọdụ.
2.2. Ozugbo ị zụrụ ọrụ ahụ, a na-amalite nkwekọrịta n'etiti anyị.
3.1. Anyị ga-enye ọrụ anyị dabere na ozi ị nyere, yana nkwukọrịta ọ bụla n'etiti akaụntụ ere ahịa gị na Amazon
3.2. Paymentgwọ ịkwụ ụgwọ gị maka ọrụ a agaghị akwụghachi na nkwụghachi ụgwọ ejiri n'aka.
4.1. Anyị ga-eme ihe banyere esemokwu ahụ ozugbo enwere ike dabere na ozi ị nyere.
4.2. Anyị na-enye ntuziaka iji mesoo Amazon. Ọ bụ ọrụ dịrị gị ịgbaso ha otu kachasị mma.
4.3. A ga-enye gị ọrụ anyị ruo mgbe oge ọrụ anyị ga-agwụ.
Ihe Anyị Na-adịghị Eme
5.1. Anyị anaghị enye ụdị ndụmọdụ gbasara iwu.
5.2. Anyị anaghị akwụ ụgwọ maka iwu ọ bụla metụtara gị megide usoro aghụghọ ọ bụla.
5.3. Anyị anaghị azọrọ nkwa ọ bụla maka nkwusioru ọ bụla n'ọdịnihu mgbe oge anyị gwụsịrị.
Ihe You ga-emerịrị
6.1. Anyị na-adabere na ozi ị nyere. Kwesịrị ịnye ozi niile na akwụkwọ mbụ (ọ bụrụ na a jụrụ gị) nke ọma na ị maara. Okwu ọ bụla na-ebili karịa ozi enyere enweghị ike ịdaba na anyị.
6.2. Kwesịrị ijide n'aka na ị na-enwe nkwukọrịta ezi uche dị na anyị n'oge oge ọrụ anyị maka ịrụ ọrụ ka mma. Anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị site na mail, ekwentị, faksị, ma ọ bụ leta. Biko hụ na ị gaghị eleghara anyị anya ma ọ bụ na ọ nwere ike ibute ọrụ na-adịghị mma nke anyị na-agaghị enwe ike ịdabere na ya mgbe niile.
6.3. Idebe iwu na ụkpụrụ Amazon bụ ọrụ gị.
Etu aga-esi emebi nkwekọrịta ahụ
7.1. Nwere ike ịkagbu nkwekọrịta gị na anyị mgbe niile. Iji anyị niile ihe ị chọrọ ime bụ zitere anyị a mail na info@aplusglobalecommerce.com gbasara akagbuo
Etu anyị nwere ike isi kwụsị nkwekọrịta ahụ
8.1. Enwere ike ịkwụsị nkwekọrịta ahụ site n'akụkụ anyị tupu ụbọchị iri na anọ nke ọkwa. N'okpuru ebe a bụ okwu ndị ga-eme ka anyị kwụsị nkwekọrịta a.
8.2. Have emebila usoro & Ọnọdụ.
8.3. Ozi ị nyere adịghị adị ma ọ bụ dị wayo.
8.4. Enweghị akwụkwọ ozi si n'akụkụ gị ruo ọnwa 6 (n'ozuzu ya).
9.1. Iwu nke India na-achịkwa nkwekọrịta a gị na gị. A ga-edozi esemokwu ọ bụla na nkwekọrịta ahụ ụlọ ikpe ọ bụla na India.
Anyị bu n'obi ịnye ọrụ anyị n'ọkwa kachasị elu. Nke a bụ ihe mere anyị ji jiri nzaghachi gị kpọrọ ihe nke ukwuu.
Ọ dị mkpa ka ị mee ka anyị mara na oge ọ bụla ọrụ a na-ejughị gị afọ ka anyị wee nwee ike imezi ihe meziwanye ihe anyị nwere.
Anyị ga-anwa ịzaghachi ngwa ngwa o kwere omume maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ okwu ọ bụla ma were ihe n'aka anyị iji mee ka ọ dị ka nkwekọrịta ahụ.
Usoro anyị maka ịme mkpesa
Biko soro usoro a iji nyere aka dozie esemokwu gị ozugbo enwere ike.
Chọrọ nkọwa maka mkpesa:
Iji mee mkpesa nye ozi ndị a a jụrụ n'okpuru.
Aha gị na adreesị ozi-e
Nkọwa doro anya banyere mkpesa gị ma ọ bụ nchegbu gị
Nkọwapụta etu ị ga - achọ ka anyị mezie ọnọdụ ahụ
Esi eme mkpesa na anyị?
Zipu nkọwa gi yana mkpesa na info@aplusglobalecommerce.com
NaNkwụghachi na Nkagbu
APlus Global Ecommerce anaghị ewepụta ihe nkwụghachi ọ bụla mgbe enyere ọrụ ahụ. Ọ bụ ọrụ gị ịghọta amụma nkwụghachi azụ n'oge nzụta ahụ.
Ma n'ọnọdụ ndị pụrụ iche, anyị pụrụ ime ihe dị mkpa banyere ụdị ọrụ anyị na-enye.
Anyị ga-asọpụrụ nkwụghachi na ọnọdụ ndị a:
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ọrụ achọrọ na enweghị ike izipu ozi n'ihi onye na-eweta email gị. Na ọnọdụ a, anyị na-akwado gị ka ị kpọtụrụ ASAP maka enyemaka. A ga-edozi azịza ndị a na ngalaba ọrụ ndị ahịa na ederede. Ekwesịrị inye ederede n'ime ụbọchị 2 iji tinye iwu ma ọ bụ na a ga-eleba anya na ọrụ a natara.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ụdị ọrụ achọrọ ka ekwenye. N'okwu dị otu a, ị ga-akpọtụrụ Ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa n'ime ụbọchị 2 nke ụbọchị ịzụta. Ga-enye iwu doro anya megide ọrụ ịzụrụ na nkọwa ya. Ọ bụrụ na mkpesa ahụ yiri ka ọ bụ ụgha ma ọ bụ wayo, ọ gaghị enwe obi ụtọ ma ọ bụ sọpụrụ.
Nwere ike itinye akwụkwọ maka nkwụghachi ma ọ bụrụ na ị zụrụ mana tupu ị nweta ọrụ ahụ ezubere. Can nwere ike izipu arịrịọ ahụ yana ihe kpatara nkwụghachi.
Anyị na-achọsi ike inyere aka ma mee ihe kachasị mma nke ohere ọ bụla anyị nwere iji nyere gị aka !!!